İzmir'li Verdi အဆိုပါ Kaz တောင်တန်းသည် Fight, ထို Trojan horse ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌များမှာ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး17 Canakkaleİzmir'li Verdi အဆိုပါ Kaz တောင်တန်းသည် Fight, ထို Trojan horse ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌များမှာ
12 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 17 Canakkale, အထွေထွေ, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
တောင်ပေါ်မှာတူး Trojan horse တိုက်ပွဲအပေါ်ကတိထားတော်ခဲ့ကြသည် izmirliler
အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်နှိမ်နင်း၏သဘောသဘာဝအတွက် Kaz တောင်တန်းİzmirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer ထောကျပံ့ပေးမယ့်အဘယျ "ရေနှင့်ယုံကြည်ချက်ဖမ်းဆီးရမိ" ဆန့်ကျင်ထွက်သယ်ဆောင်: "ကျနော်တို့ရုန်းကန်အထောက်အကူပြုဖို့အဓိကမြို့ကြီးများအတွက်အားလုံးဘားအသင်းအဖွဲ့များအပေါ်ကိုပဌနာလိမ့်မယ်" ဟုသူကပြောသည်။
Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer ကြောင့်ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများအစီအစဉ်အပေါ် Dardanelles ထံသို့သွားလေ၏။ ယင်းအရေးယူဆောင်ရွက်မှုTunç Soyer ကူညီပံ့ပိုးရန်ဒေသတွင်း၌နိုင်ငံသားများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်သောရွှေမိုင်းနှင့်ဖြစ်ပွားနေသော 16 ကာလ "ယုံကြည်ချက်ရေနှင့်ဖမ်းဆီးရမိ" ဆန့်ကျင်အစပျိုးသတ္တုတွင်းက်ဘ်ဆိုက်များ၏လက်ရှိအခြေအနေဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်GökhanTunç Soyer တွေ့ဆုံရန်Çanakkaleမြို့တော်ဝန်Ülgür၏ပျက်စီးခြင်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်အောက်ပါထုတ်ဖော်ပြောဆို: "ဤအရပ်၌ငါမြင်နေပြီးနောက်သြတ္တပ္ပစိတ်ကျွန်းတနိုင်ငံမှလူသားတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းစိတ်ကူးလို့မရပါဘူး။ ငါတကယ်တစ်ဦးမိုးသည်းထန်စွာစားပွဲပေါ်မှာရှိသည်။ ထိုဒေသတွင်ပညတ်တရား၏လယ်ပြင်၌တရားမျှတမှုနှင့်သဘာဝအခွင့်အရေးကိုဒါကျွန်တော်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ကာကွယ်ရေးစစ်တိုက်ခြင်းငှါရှိသည်။ ကျနော်တို့စည်းရုံးဖို့ကြိုးစားရမယ်အပေါင်းတို့၏မြို့တော်ဝန်အဖြစ်မြို့တော်ဘားအသင်းမှ။ တစ်ပတ်ကာလအတွင်းဘားနှင့်အတူတိုင်ပင်အတွက်ပညတ်တရားသည်ငါအားကောင်းကာကွယ်ရေးဖွဲ့စည်းရန်ဖိတ်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ပျက်စီးမှုများပရိသတ်မတည်မနေနိုငျပါ။ အမျိုးမျိုးကဒီ၏နိုင်ငံရေးကို ကျော်လွန်. လူသားအပေါငျးတို့သစိုးရိမ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခု။ "
အဆိုပါ cagri အပေါ် Geese တောင်တို့ထံမှ Soyer tunc
ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးရဲ့အဆုံးမှာ Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer, ခင်ဗျားတစ်ယောက်တည်းဘယ်တော့မှမနေ ", တဖန်တစ်ဦးစိမ်းလန်းစိုပြေသတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့်သတ္တုတွင်း site ကိုဆပ်လိမ့်မယ်။ ငါတို့အစွမ်းသတ္တိနေပါစေလုံလောက်ဘယ်လောက်ကျနော်တို့လုယက်ဆန့်ကျင်ဆုံးအထိကိုတိုက်လိမ့်မည်ဟုတည်ရှိသည်။ အကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးသညျငါ၏ဝိညာဉ်သည်အဆုံးတိုင်အောင်အသငျသညျကိုထောကျပံ့လိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Soyer နှင့်Ülgürဂျနီဖာ, သူတို့ကသတ္တုတွင်း site ကိုစိုက်သောပျိုးပင်ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဖို့ထောက်ခံမှုပေးစားလေ၏။
နိုင်ငံတော်သမ္မတဖမ်းဆီးရမိဒေသများ၏လှုပ်ရှားသူသဘောသဘာဝနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ပြီးနောက်စာမေးပွဲအတွက် Soyer သတ္တုတွင်းဒေသများ, "ဒီဇယားသည်အချင်းလူသား, သူ၏စိတ်နှလုံးခဲကိုမြင်လျှင်ပြီးနောက်ဆိတ်ကွယ်ရာအတွင်းပိုင်းထိ မိ. လဲဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့တွင်ဒီဥစ္စာဆန့်ကျင်ခုခံတဲ့အကြီးအဝိညာဉျကိုလည်းမရှိ။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကွဲပြားခြားနားမှုကျော်လွန်ပြီးလူတွေကဒီအာဏာကိုဆက်သွယ်မယ့်အင်အား။
သောဤ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်, ကျနော်တို့Ülgürနိုင်ငံတော်သမ္မတထောက်ခံသူကိုလူတိုင်းကချီးကျူးဂုဏ်ပြု။ ဤသည်ခုခံရေးဥပဒေနှင့်ချဲ့နှစ်ဦးစလုံး၏အသိကိုခိုင်ခံ့စေရမည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့မှန်ကိုသိပေမယ့်လည်းတစ်ဦးခိုင်လမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသံတွေကိုမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင်္ဘောရောက်ရှိဖို့သူတို့ကိုထောက်ပံ့, ကနေဒါမှအသံ။ အတူတူကျနော်တို့အားကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်Tunç Soyer, လက်ဖက်ရည်သောက်နှင့်စခန်းချနေထိုင်မည့်ဧရိယာ၌ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့်အတူခဏ chatting ။ အဆိုပါÇanakkaleမြို့တော်ဝန်ÜlgürGökhan Soyer သမ္မတ Dardanelles တလွှားအားလုံးသတ္တုတူးဖော်ရေးလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏။
Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer နှင့်ÜlgürGökhanÇanakkaleမြို့တော်ဝန်ထို့နောက် Izmir အတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုထောကျပံ့ဖို့Çanakkaleမြို့လယ်၏အဝင်မြို့တော်ဝန်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ CHP İzmirပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌ Deniz Yücelနှင့်ပါတီများ၏လူငယ်တောင်ပံအဖွဲ့ဝင်များအုပ်စုကိုလည်း Kaz တောင်တန်းများအတွက်ရုန်းကန်များ၏ရှေ့မှောက်၌ Trojan horse ကိုမြွက်ပါဝင်သည်ကိုပေး၏။
ထူထောင်ခံရဖို့ Kaz တောင်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကို 22 / 09 / 2014 စည်းဝေးပွဲမှ Kaz တောင်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကို: ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးBalıkesirတောင်တန်း၏ Edremit ခရိုင်နှင့်အတူအောက်စီဂျင်အပေါ်မူတည်သည့်အဲလ်ပ်တောင်တန်းများတွင်ငန်းပြီးနောက်, နှင်းလျှောစီး LIFT installed လိမ့်မည်။ MUSIAD Bandirma Balikesir မြို့တော်ဝန် Edip Ugur, Edremit ခရီးသွားလုပ်ငန်းပရဒိသုပင်လယ်ကွေ့၏ပုလဲတစ်အစည်းအဝေးတွင်မိန့်ခွန်းပြောကြား, သတငျးကောငျးနှင်းလျှောစီး LIFT ဒဏ္ဍာရီ Kaz တောင်တန်းတွင်တပ်ဆင်ပါလိမ့်မည်ကိုပေး၏။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင်လည်းမြို့တော်ဝန်အကြံပေးအဆိုတော်အစ္စမေးလ် Ozkan တက်ရောက်ခဲ့သည်။ MUSIAD 87 ။ အဆိုပါ Ugur တက္ကသိုလ်များ Bandirma ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ပထမဦးဆုံးမှာအထွေထွေအလုပ်အမှုဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုလည်းစိတ်တွင် Edremit ပင်လယ်ကွေ့စောင့်ရှောက်ခြင်းပြုစီစဉ်ထားကုမ္ပဏီကြီးစီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ထွန်းမှုကရှင်းပြသည်။ တနင်္ဂနွေကျော်, ဧရိယာနှင်းလျှောစီး LIFT မှရဟတ်ယာဉ်အားဖြင့် Kaz တောင်တန်းများ၏အမြင်များ install လုပ်ဖို့ ...
ပြင်သစ်ခရီးသည်ရထားစီးခုနှစ်တွင်သူမငယ်ရွယ်မိန်းကလေးငယ်များခရီးသည်များ၏ရှေ့မှောက်၌မုဒိန်းကျင့်ခံခဲ့ရ 17 / 02 / 2015 ပြင်သစ်အတွက်ခရီးသည်ရထားစီး, ငယ်ရွယ်မိန်းကလေးငယ်များခရီးသည်များ၏ရှေ့မှောက်၌မုဒိန်းကျင့်ခဲ့ကြ: အဆင်ခြေဖုံးရထားစီးအတွက်ပဲရစ်, ပြင်သစ်အတွက် 22 နှစ်အရွယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၏မြို့တော်, အခြားခရီးသည်များ၏ရှေ့မှောက်၌မုဒိန်းကျင့်ခံခဲ့ရသည်။ ဘာမှနေစဉ်အဖြစ်အပျက်မျက်မြင်သူကိုခရီးသည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာစေ၏။ ပြင်သစ်မီဒီယာအစီရင်ခံစာများအဆိုအရ; အဖြစ်အပျက်ဖေဖော်ဝါရီလ4၏ညဥ့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးမီးရထားပေါ်ရန်ဘူတာရုံမှလာသော 40 23.49 ကနေပဲရစ်ကနေငယ်ရွယ်မိန်းကလေးမြို့တော်, Melun ကီလိုမီတာ။ မိန်းကလေးချဉ်းကပ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှရထားစောင့်ဆိုင်း Young ကမိန်းကလေးနှုတ်ဖြင့်အလွဲသုံးစားပြုလာသည်။ ထိုအခါသံသယရှိသူရထားပေါ်တွင်ရထားစီးသူပါတီမိန်းကလေးများကြိုတင်မဲအတွက်စွန့်ခွာလာ ...
CHP Topbas zurnayla drums အဆိုပါ Metrobus ကိစ္စတွင်သတိပေး 03 / 10 / 2012 ရုံး၏စွပ်စွဲချက်အလွဲသုံးစားမှုဘို့စမ်းသပ်အပေါ် CHP နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Kadir Topbaşဒုတိယကြားနာသတိပေးဆန့်ကျင်မှုများဝယ်ယူ Metrobus ပထမဆုံးကြားနာတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက် IMM အဆောက်အအုံçaldırarakဗုံနှင့်ပုလွေများ၏ရှေ့မှောက်၌မနက်ဖြန်ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ CHP အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်အတွက် Sarachane များ၏ရှေ့မှောက်၌စုဝေးစေ Metrobus အစ္စတန်ဘူလ်တရားခွင်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Kadir Topbas zurnayla ဗုံ၏ဒုတိယကြားနာငါ့ကိုသတိပေးခဲ့သည်။ မွန်းတည့်အချိန်၌ IMM အဆောက်အဦးဟာ CHP အစ္စတန်ဘူလ်ပြည်နယ်ဒုဥက္ကဋ္ဌ Mustafa Atas ကိုဖန်ဆင်းကိုယ်စား CHP ကြေညာချက်များ၏ရှေ့မှောက်၌စုဝေးစေတော်မူ၏။ attachments; ယခုနှစ်3Group ကအစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ပိုက်ဆံကုန်မှာအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံ CHP ဥပဒေရေးရာစစ်တိုက်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Kadir Topbas ...
ဝန်ကြီး Yildirim ကျေးဇူးတင်İzmir'li 16 / 10 / 2012 မီးရထား-in ကိုပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၏အလုပ်သမားရေးရာပြည်ထောင်စုအကြားစုပေါင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုနှင့်အတူ AK ပါတီ Izmir ပြည်နယ်ကိုသမ္မတအိုမာဂျီဟတ် akai, İZBANအဆိုပါ walkout ကြုံနေရပြီးနောက်များကိုရန်ပျက်ကွက်ချက်ချင်းသားကောင်အွန်နှင့်ပို့ဆောင်ရေး၏လိုအပ်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများလယ်ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim ကျေးဇူးတင်၏လူများကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ activated ထဲသို့ဝင်ပြီးနောက် သူတို့ဖြစ်ကြသည်ဟုသူကပြောသည်။ တူရကီ 10,3TCDD ကနေဝန်ကြီး Binali Yildirim ရဲ့ညွှန်ကြားချက်။ AK ပါတီ Izmir ပြည်နယ်ကိုသမ္မတအိုမာဂျီဟတ် akai izban ဖို့တာဝန်စက်လုပ်သမားရဲ့ဆင်တူ၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုထံမှ 10 အပါအဝင် 20 "ချစ်ခင်ရပါသောဝန်ကြီးအမြဲအဖြစ်, Izmir နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Izmir ခငျြး၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ပြဿနာများ၏ပြဿနာမှအထိခိုက်မခံပြုမူ ...
Metro နံနက်တိုင်အောင်ပြေး AKP 08 / 06 / 2013 Metro အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် AKP မြေအောက်ရထားနှင့် Metrobus အချိန်နံနက်တိုင်အောင်အပြေးဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်မော်ရိုကို-အယ်လ်ဂျီးရီးယား ... ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝန်ကြီးချုပ်များ၏ဆိုက်ရောက်၏နံနက်တိုင်အောင်တိုးချဲ့လျက်ရှိသည်နှင့်တူနီးရှား၌သူ၏အရာရှိတဦးကခရီးစဉ်ကိုဖြည့်စွက်ပြီးနောက်တူရကီမှပြန်လာသောခဲ့သည်။ ဝန်ကြီးချုပ်အာဒိုဂန် 02.00 အစ္စတန်ဘူလ် Ataturk လေဆိပ်အစီရင်ခံခဲ့သည်အချိန်တွင်လေထုထဲတွင်ရှိလိမ့်မည်။ AKP လေဆိပ်မှာအာဒိုဂန်တွေ့ဆုံရန်ဖြစ်ရပ်များတစ်စီးရီးကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်လေဆိပ်သူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်မိုဘိုင်းဖုန်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူ AKP ရဲ့ခရိုင်အဖွဲ့အစည်းများ, လေဆိပ်ကိုလည်းဝန်ဆောင်မှုဖယ်ရှားပစ်ရန်မေ့လျော့မပေး။ AKP အချင်းချင်းအပြန်အလှန်တတ်နိုင်သမျှတိုးချဲ့ခဲ့လေဆိပ်က Metro န်ဆောင်မှုများပေးရန်ဝန်ဆောင်မှုမလာနိုငျပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် 06.00-24.00 အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်က Metro AKP transportation're ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခက်အခဲရှိခြင်း timetables အကြားအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင် ...
AKP အဆိုပါလမ်းရထားထိန်းချုပ် 14 / 03 / 2016 AKP ပါတီခေါင်းဆောင်များအားဖြင့်လိုက်ပါသွားသည့်လမ်းရထား AKP Izmit ကောင်တီကသမ္မတအလီ Korkmaz, ထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့်ဖြစ်ပွားနေသောကောင်စီဝင်နှင့် တွဲဖက်. အတွက်လမ်းရထားအကျင့်ကိုကျင့်၏ဆောက်လုပ်ရေးကြီးကြပ်။ Korkmaz အာဏာပိုင်များ၏လုပျငနျးနဲ့ပတျသကျတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အခြေအနေအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များ, စီမံကိန်းမြို့အဘို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်လေ့လာမှုထုတ်ဖော်ပြောဆိုမည်ဖြစ်သည်။ Korkmaz ခရိုင်ဥက္ကဌကြေညာချက်, izmitli ယခုနှစ် 2017 ၏ပထမသုံးလပတ်အတွက်လမ်းရထားစီးမယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆို။ အခြေခံအဆောက်အအုံငျးလကျသံလမ်းကိုတင်သော၏ယခုအချိန်တွင်မှာ "အဆိုပါကန်ထရိုက်တာမန်နေဂျာ၏နောက်ဆုံးအခြေအနေအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့, အ AKP ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အခြားတစ်ဖက်လွန်လုပ်ဖို့ကွန်ကရစ်အလုပ်လုပ်နေကြသည်။ ကျနော်တို့ 1 ကီလိုမီတာအပိုင်းဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်ရထားလမ်းစစ်ဆင်ရေးခဲ့သည်ကိုကူး။ ဒါ့အပြင်ဒီအရောင်းအဝယ်နှင့်အတူ ...
4 / B'li နှင့်ပင်စင်စား Fitri receiver တည်နေရာယူဆောင်ခဲ့သည် 27 / 05 / 2018 ပို့ဆောင်ရေးနှင့်မီးရထားအလုပ်သမားများအခွင့်အရေးဆိုင်ရာသမဂ္ဂ (UDEM Hak-Sen), စာဖြင့်ရေးသားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုသမ္မတအဗ္ဗဒူလာ Peker လုပ် "ဟာအလွန်အငြိမ်းစားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူထုအခြေပြုအစေခံကျွန် status ကို4/ B'li အတွက်အလုပ်လုပ်နေသည့် filter ကိုမှယူဆောင်ခဲ့သည်ပြည်နယ်တစ်ဦးအရှက်ကွဲခြင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ကြောင်း, ဖော်ပြလိမ့်မယ်" ဟုသူကပြောသည်။ Peker; "သာသနာရေးသမ္မတ 19 TL ဿွာန်အဖြစ်မူရင်းခေါင်းစဉ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုမဟုတ်သလိုလူမှုရေးပြည်နယ်အတွင်းရှိဝန်ထမ်းများအကြားဝင်ငွေဖြန့်ဖြူးမဟုတ်သလိုလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာနားလည်မှု, ကျွန်တော်အနေနဲ့ fit မသင့်သောအတိုင်းအတာအထိမဟုတ်သလိုသြတ္တပ္ပစိတ်ဘာသာတရားကိုမှဘာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အလုပ်အဖွဲ့အလွန်အငြိမ်းစားနှင့်စစ်ထုတ်ပေါ်မှာငါတို့အရပ်ဘက်အစေခံကျွန် status ကို4A / C မုသားဖော်ပြလိမ့်မယ်အတွက် ဒါဟာဥပုသ်လ၏လ၌ဤပြည်နယ်တစ်4/ B ကို 's မိသားစုဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ ...
Radar သတိပေးခြင်းအတွက် Trabzon ပြား Applications ကိုနောက်ဆုံးမှပေးထားခဲ့သည် 04 / 04 / 2013 Trabzon အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုတွင်ပြောသည်, "Radar သတိပေးခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ '' လျှောက်လွှာကိုနောက်ဆုံးဓါတ်ပုံကိုဖော်ပြထားသည်။ အတော်ကြာအသွားအလာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်မျှမပြားများနှင့် traffic ကိုသင်းရှိပါတယ်ရှိရာဒေသများအတွက် drive ကို၏အမြန်နှုန်းနှင့်အသွားအလာမတော်တဆမှု၏ဖြစ်ပျက်မှု, "ရေဒါမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှု၏ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြားမှုအဆိုပါယာဉ်အသွားအလာအဖွဲ့ကအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းရှင်းပြကြေညာချက်အပါအဝင်မြို့ပတ်ရထားများနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များ Posted သင့်တယ်, အသိအမြင်ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်အတူလိုက်လျောခြင်းနှင့်ယာဉ်ကြောပြစ်မှုများ၏ဖြစ်ပျက်မှုမရှိဘဲယာဉ်အသွားအလာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမောင်း ဘယ်မှာကားမောင်းသူနောက်ကွယ်မှချထား 5-10 ကီလိုမီတာမြေပြင်ခရီးဆောင်ရေဒါသတိပေးပန်းကန်အားမရသဖြင့်လျှောက်ထားခဲ့ပါသည်ရာအရပ်၏စစ်ဆေးခြင်းစဉ်အတွင်းရေဒါအကြောင်းကြားစာ tool ကိုအလွယ်တကူတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ရေဒါသတိပေးဆိုင်းဘုတ်များဖြစ်စေဝေငှနိုင်ရန်အတွက်ထိုအရပ်၌ပြားနေရာချ လျှောက်လွှာစတင်သောပေါ်မှရက်စွဲကို ...
အိတ်ဆောင် Radar သတိပေးခြင်းပြားလျှောက်လွှာနောက်ဆုံး Verildi 12 / 11 / 2014 အိတ်ဆောင် Radar သတိပေးခြင်းပြားလျှောက်လွှာချီးမြှင်နောက်ဆုံး: အလေ့အထများနှင့်အတူလိုက်နာရန် Samsun ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာန, traffic ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှင့်အသွားအလာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို '' အိတ်ဆောင် Radar သတိပေးခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ '' လျှောက်လွှာနောက်ဆုံးဓါတ်ပုံကိုကြေညာခဲ့တယ်နာခံ၏အဆင့်တိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ရေဒါမြန်နှုန်းထိန်းချုပ် drivers တွေကိုအကြောင်းကြားလေ့ရှိတယ်။ ရဲဦးစီးဌာနတို့ကပြည်နယ်အသွားအလာထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်. ယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ စာအရေးအသားအတွက်ဖန်ဆင်းအဆိုပါကြေညာချက်, "ငါတို့တက် 2020 နှစ်ပေါင်းဖို့မြို့ပတ်ရထား, အသွားအလာမတော်တဆမှု၏ရလဒ် '' လမ်းမကြီးယာဉ်အသွားအလာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးမဟာဗျူဟာ Action Plan များနှင့်လုံခြုံရေးအထွေထွေညွှန်ကြားမှုအရသိရသည်အလုပ်လုပ်စေ '' ၏ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန, သေဆုံးမှု 50 ရာခိုင်နှုန်းနှုန်းကိုလျှော့ချရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောအသွားအလာမတော်တဆမှုအတွက် ...
မောင်းသူမဲ့မီထရိုတံခါးဒါဟာဘယ်အရာကိုဆိုလိုအလင်းသတိပေး? 13 / 12 / 2018 အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမြေအောက်ရထားလိုင်းကို၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ဖွင့်ပွဲနှင့်အတူကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ M5 Üsküdar-Cekmekoy ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၌ပထမဦးဆုံးအပြည့်အဝ automated မောင်းသူမဲ့မက်ထရိုစနစ်အားအသစ်သောသတင်းအချက်အလက်များထည့်သွင်းစတင်ခဲ့သည်။ လိုင်းအတွက်မဆိုနိုင်ငံခြားအရာဝတ္ထုများတွင်မောင်းသူမဲ့မီထရိုထို့ကြောင့် Peron တံခါးစနစ်များ (Paks) ပျေါပေါကျကြောင်းပြဿနာများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အ separator ရိုက်ထည့်ဖို့ရထားလမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ခရီးသည်ကရြောကျအသုံးပြုကြသည်။ အားလုံးလြှပျစစျစနစ်များ၌ရှိသကဲ့သို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးများအတွက်စနစ်ချွတ်ယွင်းမှုများ, ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ကိရိယာများနှင့်ပလက်ဖောင်းတံခါးများနှစ်ဦးစလုံးတံခါးဝ၌ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်တားဆီးမရပေမယ့်လိုအပ်လျှင်သတိပေးချက်များသူတို့ရဲ့ခရီးသည်များ၏ဘူတာရုံလက်လွတ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်မယ်ဆိုရင်အတူတူပြုမိသည်မဟုတ်။ Metro အစ္စတန်ဘူလ် ...
အဆိုပါ Kaz တောင်တန်းများတွင်သဘာဝအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု
ထူထောင်ခံရဖို့ Kaz တောင်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကို
CHP Topbas zurnayla drums အဆိုပါ Metrobus ကိစ္စတွင်သတိပေး
ဝန်ကြီး Yildirim ကျေးဇူးတင်İzmir'li
Metro နံနက်တိုင်အောင်ပြေး AKP
4 / B'li နှင့်ပင်စင်စား Fitri receiver တည်နေရာယူဆောင်ခဲ့သည်
Radar သတိပေးခြင်းအတွက် Trabzon ပြား Applications ကိုနောက်ဆုံးမှပေးထားခဲ့သည်
အိတ်ဆောင် Radar သတိပေးခြင်းပြားလျှောက်လွှာနောက်ဆုံး Verildi